Hiran State - News: HS:- Yaa dalka Soomaaliya galiyey maxmiyada?
HS:- Yaa dalka Soomaaliya galiyey maxmiyada?
HS:- Hadii aad tahay muwaadin Soomaaliyeed si aad u ogaato shaqsiyaadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya gaarsiiyey heerkaan Maxmiyada waa sidan.
1- Madaxweynaha Soomaaliya Shiikh Shariff Shiikh Ahmed waa shaqsiga heerkaan Soomaaliya soo gaarsiiyey kadib markii uu waxkasta dantiisa gaarka ah ku soo koobay kalana saari waayey siyaasada dalka lagu maamulayo iyo arimaha diinta.
Waxuu sabab u ahaa dhismahii midawgii maxkamadaha Islaamiga iyo bur burkii kudhacayba.
waxuu sabab u ahaa qilaafkii shirkii taariikhda galay ee fududeeyey gumeysiga maanta la galinayo umada Soomaaliyeed ee loogu magac daray Kampala Acord isagoo ay ujeedadiisu aheyd kaliya 1 sano sii joog iskana dhega tiray maslaxada iyo aayaha mustaqbalka caruurta Soomaaliyeed.
Waxuu ogoladay isaagoo madaxweyne ah inuu markasta hor fadhiisto kooxo magacyo kala duwan wata sida Ahalusuna iyo wax la mid ah oon la ogeyd ujeedadooda marka laga reebo iney dhahaan oo kaliya wxaanuu la dagaleynaa Shabaab.
2- Shariif Hasan ma ku dheeraaneyno taariikhdiisa maadama la hayo dhacdooyin fara badan hadana isagu ka mid yahay shaqsiyaadka la doonayo in lagu soo oogo dacwad marka la galiyo maxmiyada dalka Soomaaliya dhawr bilood kadib.
3- Waxaa kale oo bur burka iyo qaran jabka ku dhacay umada Soomaaliyeed loo aaneynayaa 550 ka mudane ee baarlamaanka ku jirta oo mudo 8 sano ah laaluush iyo dano shaqsiyadeed ku shaqeynayey ilaa ay maalin cad Shariif Hasan iyo Mahiga ka ansaxiyaan qodobadii awooda baarlamaanka looga qaaday ee ka soo baxay shirkii Kampala Acord loogu magac daray.
4- Maamulka Puntland ee uu hor kacayo madaxweyne Faroole iyo waliba R/wasaare Gaas oo iyagu ku mashquulay kaliya danta Puntland sidii ay u meel mari laheyd kaliya meelna iska dhigay danta guud ee umada Soomaaliyeed iyaga iyo maamulka ay deriska yahiin Galmudugna waxii ay saxiixeen hadii maxmiyad la galo cid uga liitada ma jirto maadama hadii maxmiyad la galo iyo hadii kaleba ay cidkasta iyadu deegaankeeda u tashan doonto waxey hada la mid yahiin Soomaalida kale ee dalka intiisa kale ku nool waliba kuwaas ayaaba dhaama oo mustaqbalka dhihi kara inagu waxaan saxiixnay maba jirto ee cidii heshiiskii Kampala iyo kii Garoowe saxiixday raadsada.
5- Wakiilka qaramada Midoobay u jooga Soomaaliya Ambassador Mahiga oo markii uu dalka galiyey maxmiyada hada shaqada inuu ka tago isagu codsaday si aan loogu soo raacan wax danbi ah waxii ka danbeeya shirka London ka furmaya 23ka bishani aynu kujirno oo ayka harsan tahay maalmo.
Rajada kalya ee hada hartay waa in ay dib isku wareystaan 550 mudane ee baarlamanteeriyaanka ah oo hal mowqif ka qaata xaalada hada taagan oo inteeda badan mareyso in lagu tijaabinayo Soomaalida maadama dowladaha aduunka ogaadeen in shirka London aysan imaaneyn Soomaali hal cod leh oo ay ku kala hadli doonaan dhawr firqo sida
Madaxweynah Soomaaliya oo la sheegayo inuu metelayo beeshiisa.
Faroole oo ka socda Beeshiisa
Caalin oo ka socda Beeshiisa.
Ahalusuna oo ay ka socdaan labo beel oo isku ujeedo ah hada.
Somaliland oo rajo beel ka taagan 21 sano kadib iney hesho madax banaani oo hada si aan loo dhihin waxaa maxmiyad la galinaya koofurta Soomaaliya oo kaliya iyadiina goob joog ka ah si waxa shirka London ka soo baxa aduunyadu u tiraahdo Soomaali oo dhan ayaa u dhameyd.
Sikastaba Soomaaliya waxaa ka dhalanaya dowlad dusha sare laga eegayo oo uu hogaaminayo masuul aan Soomaali aheyd waxaana dalka magac ahaan loo dhibayaa Qaramada Midoobay laakinse maamulka waxaa iska leh reer galbeet oo isticmaalaya dhaqaalo laga soo qaaday dowlado Carbeed.
La soco taariikhaha shaqsiyaadkaan aanu kor ku soo sheegnay ee ahda hor boodayo siyaasada Soomaaliya ee marqaati ka noqon doona amaba looga dhigi doono maxmiyada dalka la galinayo dhawaan.Walow uusan shaki kujirin in madaxweyne Shariif jagadiisa maalmo kuweyn karo maadaama uu hareer maray kuna tuntay sharciga wadanka u degsan.
· admin on February 21 2012 13:59:03 · 0 Comments · 2432 Reads ·
14,581,448 unique visits